MDT, Qalab dhammaystiran oo loogu talagalay Mashruuca Dhismaha iyo Mashruuca - Geofumadas
Abriil, 2014 AutoCAD-AutoDesk, Featured, Engineering, aragti ugu horeysay, topografia
Iyadoo in ka badan dadka isticmaala 15,000 50 dalalka oo laga heli karaa Spanish, English, French iyo Portugal ka mid ah luqadaha kale, MDT waa mid ka mid ah ugu mahad shirkadaha ku hawlan codsiyada geoengineering Gudoomiyaha Hispanic.
APLITOP leedahay in ay faylalka tacliimeed ee afar qoysaska codsiyada: mashaariicda sahan, codsiyada beerta la saldhigga wadarta ama qalabka GNSS, sugnan iyo photogrammetry digital. Xaaladdan oo kale aynu ka hadalnaa MDT, kuwaas oo isticmaala muhiimsan waxaa weeye maamullada dadweynaha, shirkadaha dhismaha, injineernimada, naqshadaha, Magaaleynta iyo shirkadaha ka go'an in ay earthworks, dhagaxyadii qorqornaa, macdanta, deegaanka, iwm, iyo sidoo kale shaqaale madax banaan.
MDT waxaa lagu rakibi karaa noocyo kala duwan oo ah AutoCAD, oo ay ku jiraan kuwa ugu dambeeyay, iyo sidoo kale meelaha kale ee ka raqiisan, sida BricsCAD iyo ZWCAD.
MDT islana user u baahan yahay iyada oo loo marayo core a scalable in lagu salayn karaa version caadiga ah ama xirfadle, iyo tiro ka mid ah modules optional for sahan, images, iyo daruuraha dhibic.
La heerka caadiga ah ogolaanaya saxba dhul isticmaalaya dhibcood qaaday goob kasta oo guud ahaan ama GPS, dhalin contours, heli profiles gaadhya iyo transverse, xisaabi mesh Muga farqiga ama profiles, oo arki dhul ee 3D.
La qaybta xirfadeed waxaa loogu talagalay inay ka caawiso isticmaalaha dhammaan qeybaha waxqabadka mashruuca waddooyinka, magaalooyinka, miinooyinka, miinada iwm. Waxaa ka mid ah dhammaan muuqaalada ku jira qaabka caadiga ah iyo sidoo kale wuxuu leeyahay qalab loogu talagalay qaabeynta isku dheelitirka cirifka iyo tooska ah, sawirada dhererka iyo isugeynta mashruuca, abuuray bedelka isbedelka, liiska cubación, qeexay, iwm.
El shaxda shaxda waxay faa'iido u tahay ka shaqeynta goobaha guud ee kormeerka, xisaabinta isku-duubnaanta dhibcaha, gar-isweydaarsiga iyo shabakadaha, iyo sidoo kale sameynta isbeddel is-dhexgal oo u dhaxeeya hababka tixraaca ee yoolalka iyo saadaalinta.
El sawirka muuqaalka waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku dhejiso sawirada juquraafi ah ee ku yaal jagada, iyo sidoo kale inaad geliso sawirada goobta, kala qaybin iyo jeeg, beddel qaraarka, samaynta isbeddelada iyo deformations, helitaanka khariidadaha khadka maabka (WMS), iwm.
El Mawduuc daruuri ah wuxuu u fasaxayaa inuu isticmaalo oo uu hirgeliyo dariiqooyinka dhibcaha ee ay qabteen tiknoolijiyada LiDAR, taran ama codeyn sawirro leh, awood u leh in ay maareyn karaan malaayiin dhibcood oo laga soo dajiyay faylasha qaababka ugu caadiga ah. Dhibcooyinka waxaa lagu muujin karaa midab dabiici ah, xoojin ama qayb. Waxa kale oo uu abuuraa qaababka dheeraadka ah ee loo yaqaan 'polyvin' ama 'axis', iyo sidoo kale qaabka dijital oo loo dhoofin karo CAD.
Post Previous«Previous Wac adeegyada WMS ee Microstation
Post Next SuperGeo galo isbahaysiga la GPS PL in ay bixiyaan xal macasha macruufkaNext »
7 Jawaab "MDT, Dhamaystir xal buuxa mashruucyada Muuqaalka iyo Isgaadhsiinta"
Adriana Salazar Light isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan ahay SHARAXAAD, sida ay u badan tahay in barnaamijku wax u dhinto oo HADDII aad wax baratid, waxay leedahay DHAQAN DHEERAAD AH AMA KU SAABSAN XIRIIRKA BADAN AYUU KA MALAHAN YAHAY SII SAAR
Waxaad la xiriiri kartaa dukaamayste gaaban oo aan ahayn waddan.
António Petiz isagu wuxuu leeyahay:
Gostaria de testar ama barnaamijka 'MDT TOPOGRUPT'.
Sida ama ka faa'iidaysiga.
carlos perez isagu wuxuu leeyahay:
barnaamij leh noocyo badan oo horumarineed
Vladimir garcia isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan xiiseynayaa koorsada aan ka socdo Colombia, fadlan qiimo
Hello Ana Maria, Ku soo dhawoow Aplitop!
Waxyaabaha ugu horeeya waa in aad ku mahadsantahay danahaaga nooca nooca, badeecada iyo adeegyadeena, taas oo aan ku qanacsanahay inay dabooli doonto filashooyinkaaga.
Waxaad noogu soo diri kartaa email taageer@aplitop.com, waxaan kuu soo diri doonnaa macluumaad ku saabsan koorasyada internetka, kaas oo sharaxaya qaliinka iyo mudadaas, kuwaas oo ah 2 bilood, haddii aad hayso wax su'aalo ah waan kugu farxi doonaa inaan ku caawino.
Waxaanu hadda haysannaa ruqsadaha firfircoon ee 15.000 ee adduunka oo dhan, kaas oo noo ogolaanaya inaan sii wadno tixgelinta jawaab-celinta farsamada, tayada iyo adeegga ka jira horumarinta mashaariicda software-ka ee Mawduuca iyo Maareynta Shaqada.
Ana María Segura Marín isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii ay jiraan koorsooyin bilaash ah oo MDT ah oo bilaa shaqo ah ... on-line ama fool-ka fool ... dadka shaqo la'aanta ah